के 911 आन्तरिक काम थियो? De Telegraaf सँग तपाइँका सबै प्रश्नहरूको जवाफहरू छन्! : मार्टिन Vrijland
के 911 आन्तरिक काम थियो? De Telegraaf सँग तपाइँका सबै प्रश्नहरूको जवाफहरू छन्!
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	11 सेप्टेम्बर 2019 मा	• 12 टिप्पणिहरु
उहाँ सहानुभूतिशील केटा हुनुहुन्छ, विल्सन बोल्डेविजन, जुन मैले उनीसँग केहि महिना अघि गरेको कुराकानीमा प्रस्ट देखिएको थियो (हेर्नुहोस्) यहाँ)। भेडाहरूको लुगामा रहेका ब्वाँसाहरू जहिले पनि अरू भेडा जस्तै देखिन्छन् त्यसैले उनीहरूलाई कुनै खतरा छैन जस्तो देखिन्छ। विल्सनले वृत्तचित्रहरूको एक श्रृंखला सुरू गरेका छन् जसमा उनले सबै ठूला षडयंत्र सिद्धान्तहरूलाई समेट्छन् जुन डि टेलेग्राफका अनुसार प्रसारित भइरहेको छ। उसले नियन्त्रणको विपक्षमा मास्टरलाई यहाँ ल्याउँछ, जर्ज वान होट्स, क्यामेराको अगाडि, सिल्वान शुन्होभनसँग, टेलिग्राफको "आतंकवाद रिपोर्टर"। तपाईंले यसलाई त्यसरी देख्नुपर्दछ। एउटा कसाईले मासुको मासुको आलोचनाको स्वरूप प्रदान गर्न प्रयोग गर्दछ र अर्कोले कसाईलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। कसाई जसले आफ्नै मासुको निरीक्षण गर्दछ।
षडयन्त्र सिद्धान्तहरूले समर्थन प्राप्त गर्न सक्दछ। निश्चित रूपमा यदि तपाईं तिनीहरूलाई यस्तो तरिकाले मोड्नुहुन्छ कि ती प्रस्तावहरू छन् जुन तपाईंलाई पहिल्यै थाहा छ कि तपाईं तिनीहरूलाई पछाडि पछाडि ढकढक्याउन सक्नुहुन्छ (डबल तल्लोमा बम)। षडयन्त्र सिद्धान्तहरू महत्त्वपूर्ण कारणको साथ पक्षमा बढ्न सक्छन्। त्यो कारण तथ्यमा फेला पार्न सकिन्छ कि तिनीहरू 'दायाँ-वि wing्ग विचारहरू' वा 'दायाँ-वि wing्ग' ब्राण्ड ('सहीको लागि अ English्ग्रेजी)' सँग सम्बन्धित छन्। यदि तपाईं त्यस समूहलाई लिंक गर्न सक्नुहुनेछ, जसले त्यस्तो सोच्दछन्, एक राजनीतिक आन्दोलनको साथ र त्यो आन्दोलनलाई सत्तामा आउन दिनुहुन्छ र त्यसपछि अर्थव्यवस्थालाई ठूलो दुर्घटनाको लागि निम्त्याउनुहुन्छ भने तपाईंले त्यो सम्पूर्ण समूहसँग व्यवहार गर्नुहुनेछ र सबै आलोचनाहरू एकै ठाउँमा झर्नेछन्। ।
यहाँ टेलीग्राफ रिपोर्ट हेर्नुहोस् र तल पढ्नुहोस्।
हामी देख्छौं कि अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको साथ र बेलायतमा भइरहेको छ ब्रेक्सिट आन्दोलनको साथ। ब्राजिलमा यो "सहि" छ जोयर बोल्सनो र बाँकी युरोपमा हामीले दायाँबाट उठेको पनि देख्यौं, तर त्यो ब्रान्डको नियन्त्रण विध्वंस पहिले नै चलिरहेको छ (हेर्नुहोस्। यहाँ पूर्ण विवरण)। त्यसकारण तपाईं षड्यन्त्रहरूमा विश्वास गर्न सक्नुहुनेछ; केवल वा उही शक्ति द्वारा बनाइएको संस्करणमा। विपक्षमा पकड राख्ने उत्तम तरिका यसलाई आफैंलाई नियन्त्रण गर्नु हो। यसैले तपाईं यस्तो साइटबाट टाढा जानुहुन्छ र यही कारणले गर्दा मेरो नाम प्रत्येक फोरममा र हरेक सोशल मिडिया छलफलमा कालो गरिन्छ र राज्य भूमिका (होम वर्कर्स र डिलफेक प्रोफाइलहरूको पछाडि टेलिमार्केटर्स) द्वारा जलाइन्छ, ताकि तपाईं नियन्त्रित फ्ल्याटको सुरक्षा जालमा पौडिनुहोस्।
वास्तवमा, हामी भन्न सक्दछौं कि 911 को बारेमा सत्यता कहिले प्रकाशमा आयो भने यसले केही फरक पार्दैन। यदि तपाईं आधिकारिक 911 व्याख्यानमा विश्वास गर्नुहुन्न भने, तपाईं पहिले नै 'षडयन्त्र चिन्तकहरू' समूहमा कलंकित हुनुहुन्छ र 'सही' ब्रान्डमा लिंक हुनुहुन्छ। यदि त्यहाँ एक ठूलो संकट छ र तपाईं त्यसलाई त्यो ब्रान्डको अगाडि पुरुषको जुत्तामा राख्न सक्नुहुन्छ (डोनाल्ड ट्रम्प, जैयर बोल्सनारो, बोरिस जोसन, थियरी बाउडेट र त्यस्तै अरू), त्यसपछि बाँकी समाजले त्यो समूहलाई निन्दा गर्दछ र सबैजना हुन्छन् मुख्यधारको मिडिया र पुरानो राजनीतिक अर्डरमा फर्किन्छ। कि यस्तो ठूलो संकट आउँदैछ, अब धेरैलाई स्पष्ट हुन सक्छ।
वास्तवमा, 911 वरिपरि तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ षडयन्त्रलाई सँगै राख्नको लागि पर्याप्त कारण थियो, चाहे सिल्भन शुन्होभनले यसलाई सीधा टेक्नको लागि जति सक्दो राम्रो गरे। 'लागू ब्लास्टि charge चार्ज स्टोरी', तथापि, 911 षड्यन्त्र सिद्धान्तको डबल तल्लोमा बम देखिन्छ। अन्य सिद्धान्तहरु पनि जाँच गर्न सकिन्छ। को जुडी वुड्स को विवरण सब भन्दा प्रशंसनीय लाग्न सक्छ, तर त्यो पनि एक (संभवतः) सत्य-आधारित स्पष्टीकरण माथि उत्रन मा उनको भूमिका को लागी राम्रो कास्ट जस्तो देखिन्छ। तपाईलाई अरु जस्तो चाहिन्छ हडबड अनिश्चित पागल टाढा राख्नुहोस् र तपाईं सक्नुभयो। फिल्म 'लुज चेंज' को विमोचनले (टेलिग्राफ फिल्ममा विल्सन बोल्डेविजनले भनेझैं) यसले विपक्षी कसरी पूर्णतया नियन्त्रण गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ। तिनीहरू जहिले पनि सम्पूर्ण कथा अमान्य गर्न सक्षम हुन जानबूझकर गल्तीहरूमा निर्माण गर्दछन्।
विपक्षीलाई उडाउने अर्को विधि 2009 मा थियो। अमेरिकी एक्सएनयूएमएक्स 'सत्य आन्दोलन' को मुख्य रूप से एस बेकर नाम गरेको व्यक्ति द्वारा नेतृत्व गरिएको थियो। बेकर वर्षौंको लागि सबैभन्दा कट्टर 911 'सत्य खोजी' थियो। धेरै रेडियो कार्यक्रमहरूमा ऊ वैकल्पिक मिडियामा सुनेको थियो। एक क्षणसम्म एस बेकर आत्महत्या गर्न जिम फेटजर शोमा आइपुगे (तलको भिडियो हेर्नुहोस्)। कम्तिमा पनि, गोली बन्दको कारणले यस्तो आवाज आयो तर धेरै पटक ऊ जिउँदो भयो र फेरि लात हान्यो।
जब पनि षडयन्त्र सिद्धान्तहरू देखा पर्दछ, जुडी वुड्स वा अन्यको मामलामा, तपाईले छक्क पर्नु पर्छ कि कसले सबै अनुसन्धानलाई आर्थिक सहयोग गर्छ। तपाईको आफ्नै खल्तीबाट तपाईले त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ। र ती सबै अगाडि पुरुषहरूसँग पनि, जोसँग स्पष्ट रूपमा सबै पैसा र संसाधनहरू छन् आफ्नो कामको लागि खर्च गर्नका लागि, अब हामी जान्दछौं कि धेरैले गोप्य रूपमा कसाईको लागि काम गरिरहेका छन्। वैकल्पिक मिडियामा अन्य मोर्चाका व्यक्ति (जसलाई 'सत्य आन्दोलन' पनि भनिन्छ) वर्षौंसम्म भीड कोठा कोर्न को लागी अचानक जोडिएको हुन अनुमति छ, उदाहरणका लागि, पेडोफिलिया।
यसको राम्रो उदाहरण जेन गार्डनर थिए, जस मध्ये2अचानक वर्षौं अघि परमेश्वरका सन्तानको चरमपन्थी गुट भित्र एक आध्यात्मिक नेताको रूपमा बाहिर आए। उहाँ केवल छोटो अवधिको लागि मात्र हुनुहुन्न (उदाहरणको लागि, एक बर्ष)। होईन, उहाँ बर्षौंदेखि पूरै 27 हुनुहुन्थ्यो। भगवानका बाल गुटहरू उनीहरूको शिक्षामा साना बच्चाहरूको साथ यौन सम्बन्ध राख्न र अभ्यास गर्नका लागि परिचित थिए। त्यो एकदम थोरै हो। यद्यपि, विलेम फेलडरहफ र ओले डम्मेगार्ड जस्ता व्यक्तिहरूले हलहरू भरिदिए, उदाहरणका लागि, ओपन माइन्ड कन्फरेन्सले हात र दाँतले त्यस व्यक्तिको रक्षा गर्न जारी राख्छ (हेर्नुहोस्। यहाँ en यहाँ)। हामी त्यस्तो समयमा बाँचिरहेका छौं जब सत्य मान्छेलाई पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ, यदि मात्र बजारमा भएका सबै प्रविधिहरूको कारणले (हेर्नुहोस्) यहाँ)। सायद सबैभन्दा ठूलो समस्या तथ्य यो हो कि लगभग सबै मोहरा विरोधी कसाईबाट आउँछन्। थोरै कृषि अनुभूति भएको जो कोहीले 911 एक आन्तरिक काम हो भनेर सोच्न सक्छ।
पढ्नुहोस् यो लेख कसरी यो अन्डरइनर्डसँग जान्छ, किनकि यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले भिन्नताहरू सिक्न सक्नुहुन्छ।
विल्सन बोल्डविजिनसँग टेलिफोन टेलिभिजन डे डेग्राग्राफबाट: साजिश सिद्धान्तको बारेमा श्रृंखला
911 अनुसन्धान समिति अमेरिकी सरकार विरुद्ध मुकदमा सुरु हुन्छ
जर्ज वैन हाउट्स, मोर र क्लोग सुन एक सुरक्षा नेट चारा (कटोरा साजिश 911) को रूपमा
विल्सन Boldewijn (भिडियो) संग Telegraaf.nl मा मार्टिन व्रिजल्याण्ड संग लाइव साक्षात्कार
किन मार्टिन भ्रिजल्याण्डले रोबर्ट जेन्सेन, डेभिड आइके जस्ता सेफ्टी नेट प्यादहरूका बारेमा कुरा गरिरहेछन्?
ट्याग: 911, बोल्ड वाइन, साजिश, साजिश सिद्धान्त, साजिश सिद्धान्तहरू, नियन्त्रित, जर्ज, वुड्स, काम भित्र, ब्रान्ड, विरोध, दायाँ-पखेटा, सिल्वान शुन्होभन, टेलिग्राफ, वैन, विल्सन
क्यामेरा2लेखे:
11 सेप्टेम्बर 2019 मा 21: 12
यो कसरी भयो भन्नेमा खास फरक पर्दैन।
यदि तपाईंले माथिको लेखमा निलो लिंकहरू पढ्नुभयो भने, तपाईंलाई पुनःनिर्देशित गरिनेछ।
समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान ... ..
9 / 11 पछि व्यक्तिहरूको घाँटीले कति रेखाहरू थिचेको छ। यसबाट को फाइदा हुन्छ? र के यसले अहिले फाइदा गर्छ?
प्लसबाट माइनस सम्मको ब्याट्री फेरि राम्रोसँग बग्दछ।
सामान्य नागरिकहरू (कुनै सीआईए वा एआईवीडी छैन) 24 घण्टा हेर्न सक्छन् भन्ने तथ्यको अतिरिक्त, तिनीहरू पनि सहि हुनुपर्छ।
ती सुरक्षा सेवाहरूका कर्मचारीहरूलाई जाँच गरियो, किनकि तपाईंलाई कहिले थाहा छैन।
सबै कुरा अन्तिम विस्तार गर्न वाटरटाइट बनाइएको छ।
सुरक्षा सेवाहरू कहिले चुहावट हुँदैन किनभने उनीहरू आफैं चुहावटको लागि जाँच गर्दछन्।
बसिस्वेगको अफिसमा हेर्नुहोस्, बोल्डेविजनले कहिले पनि लीक गर्ने छैन ... (जे भए पनि एटीएक्सएनएमएक्स (एआईवीडी स्कूलका सदस्यहरूलाई त्यसो गर्न अनुमति छैन)), बिग ब्रदर 😉 निश्चित रूपमा लीक गर्नेहरूका लागि!
11 सेप्टेम्बर 2019 मा 23: 03
टेलिग्राफ यस किसिमको गडबडीका लागि स्रोत हो, यसैले हामी अचम्म मान्नुपर्दैन .. मोसादका लागि काम गर्ने र पक्राऊ परेका नाच इजरायलीहरूको उद्धरण गरिएको छैन, ड्यानी जोएन्कोको नाम उल्लेख गरिएको छैन न त फोक्स आफैले आफैलाई अनुसन्धान गरेका थिए। देखाए कि यो अपरेसनको साथसाथै एफबीआईको रडारमा दर्जनौं इजरायली घुसखोरहरू थिए .. अवश्य पनि, बिजल्मर प्रकोप अब बोलेको छैन, उही खेलाडीहरू?
ती बोल्ड वाइन, schoonhoven 'पत्रकारहरू' को लागी पास गर्नु पर्ने थियो, मुखबिरहरू सरल र सरल छन्।
12 सेप्टेम्बर 2019 मा 15: 56
स्यालको तार अझै प्रासंगिक छ, तर हामी त्यो लामो समयसम्म बस्नुहुन्न ... निर्वाचित व्यक्तिका अनुसार
11 सेप्टेम्बर 2019 मा 23: 13
एलन सब्रोस्कीले एक्सएनयूएमएक्समा रेडियो अन्तर्वार्तामा भने कि उनले आधिकारिक एक्सएनयूएमएक्स-एक्सएनयूएमएक्सको कथाप्रति उनको शpt्का उन्मत्त भएको थियो ड्यानी जोएन्कोको गवाहीबाट। साब्रोसकीले जुलाई 2010th9साक्षात्कारमा यसलाई दोहोर्याए।
ड्यानी जोएन्कोको मृत्युको साइट
16th जुलाई 2011 मा नेदरल्याण्ड्सको सेरोस्केर्के गाउँको सिधा सडकमा एउटा कार दुर्घटनामा उनको मृत्यु भयो।
अब्रेयू रिपोर्टले मार्च 02, 20169/ 11 व्हिसलब्लोकरको हत्या गरी।
15 सेप्टेम्बर 2019 मा 14: 24
यो वैज्ञानिक रुपमा प्रमाणका साथ समर्थित छ, तर तपाईले त्यसको बारेमा टेलिग्राफ सुन्नुहुन्न।
सीजर शेर कैफे लेखे:
12 सेप्टेम्बर 2019 मा 08: 44
म अझै पनि हराउनेहरु मध्ये एक थिए जसले सोचे कि तिनीहरु आफैंले सोच्न सक्छन्। अब म सँधै केही पनि सोच्न कोशिस गर्दैन जब यो कुरा आउँछ, अन्य चीजहरूको बीचमा, सत्य पत्ता लगाउन। म अब नियमित रूपमा मेरो दिमाग खाली गर्न जाँदैछु र सत्यको उर्जालाई आमन्त्रित गर्दैछु ... त्यसो भए तपाईले छिटै पत्ता लगाउनु हुन्छ कि कुनै सत्य छैन। तर जानुहोस् र बुझाउनुहोस् कि केहि वाक्यहरूमा र यसले के फरक पार्छ?! केवल मुख्य कुरा शैतानको झूट बोल्नेहरूलाई थाहा छ कि उनीहरू ब्यूँझनेहरू धेरै मानिसहरुको समूहले हेरिरहेका छन्!
12 सेप्टेम्बर 2019 मा 20: 11
"सत्य" र "वास्तविकता" को बीचमा ठूलो भिन्नता छ। यो भिन्नताले हाम्रो समाजमा धेरै रूप लिन्छ। मलाई लाग्छ साइकलिंग धेरै जसो व्यक्तिहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो चिनिन्छ, तर हामी यसलाई स्वीकार र यसलाई पछ्याउन जारी राख्छौं। हाम्रो अभिजात वर्ग को लागी एक राम्रो सूचक को लागी हेर्न को लागी तिनीहरूले आफ्नो झूट संग कति टाढा जान सक्छ।
13 सेप्टेम्बर 2019 मा 15: 25
तपाईंसँग धेरै व्यक्ति र धेरै व्यक्तिहरू छन् ?! म एक मान्छे हो जो तपाईंको स्थिति बुझ्दैनन्!
13 सेप्टेम्बर 2019 मा 15: 33
अब माथि देखा ...
13 सेप्टेम्बर 2019 मा 23: 57
28 जून 2001 मा प्रसारण…।
14 सेप्टेम्बर 2019 मा 12: 15
ZIO यो यसको माथि एकदम ठूलो छ, तर जनताले यसलाई जिम्मेवार लिने र सामान्य प्रचारमा निर्भर बिना नै यो हुन दिन्छ।
सामान्य संदिग्धहरू पर्याप्त प्राप्त गर्न सक्दैनन्, तिनीहरूले लात नपाउन्जेल तिनीहरू दाह्रीमा जान जारी राख्छन् ... र त्यसपछि उनीहरू राखिन्छन्
16 सेप्टेम्बर 2019 मा 17: 01
मलाई केवल भन्न दिनुहोस् कि यो त्यस्तो विवेकपूर्ण तर्कसंगत 'किसान संवेदना' संग खराब छैन र त्यसपछि म व्यक्तिगत अनुभवहरूबाट कुरा गर्छु। प्रायः व्यक्तिहरू यसलाई संज्ञानात्मक असन्तुष्टि बिना नै चाहँदैनन्, पालनाबाट चिहानसम्मको प्रोग्रामि deeply गहिरो जरामा छ
« अमेरिकाले उनीहरूले हाल्ने सबै बमहरूमा जलवायु कर कहिले तिर्ने?
तत्काल कल! हामीले मिडियालाई अब कार्यबाट टाढा राख्नु पर्छ! »
कुल भ्रमण: 4.131.764
मार्टिन भिजल्याण्ड op कोरोनाभाइरस कोविड - १:: जसको बारेमा हामीले मौरिस डि होन्ड र विलेम एन्जल सुन्न पाउँदैनौं।
मार्टिन भिजल्याण्ड op कोरोनाभाइरस कोविड - १ and र विज्ञान: यसले कसरी तपाइँको शरीरमा प्रवेश गर्दछ र तपाइँ यसलाई कसरी स्थानान्तरण गर्नुहुन्छ?
AnOpen op कोरोनाभाइरस कोविड - १:: जसको बारेमा हामीले मौरिस डि होन्ड र विलेम एन्जल सुन्न पाउँदैनौं।
Adriaan W op कोरोनाभाइरस कोविड - १ and र विज्ञान: यसले कसरी तपाइँको शरीरमा प्रवेश गर्दछ र तपाइँ यसलाई कसरी स्थानान्तरण गर्नुहुन्छ?
guppy op 'कोरोनाभाइरस कोविड -१ entitled' शीर्षक भएको नयाँ पुस्तक मार्टिन भ्रिजल्याण्डको अन्त कहाँ हुन्छ? अब उपलब्ध छ